Izibalo Zokusesha Kwe-Organic zango-2018: Umlando we-SEO, Imboni, kanye Namathrendi | Martech Zone
Ukusebenzisa injini yokusesha inqubo yokuthinta ukubonakala kwe-inthanethi kwewebhusayithi noma ikhasi lewebhu kumphumela ongakhokhelwa wenjini yokusesha iwebhu, obizwa ngokuthi yi- zemvelo, eziphilayo, noma zitholiwe Imiphumela.
Ake sibheke umugqa wesikhathi wezinjini zokusesha.
1994 - Injini yokuqala yokusesha i-Altavista yethulwa. I-Ask.com iqale izixhumanisi zesikhundla ngokuthandwa.
1995 - Msn.com, Yandex.ru, neGoogle.com kwethulwe.
2000 - IBaidu, kwethulwe injini yokusesha yamaChina.
2004 - I-Google yethule i-Google Suggest.
2009 - NgoJuni 1 iBing yethulwa futhi yahlanganiswa ngokushesha neYahoo.
Zisebenza kanjani Izinjini Zokucinga?
Izinjini zokusesha zisebenzisa ubuchule obuyinkimbinkimbi bezibalo ukuqagela ukuthi yiliphi isayithi umsebenzisi afuna ukulibona. I-Google, i-Bing, ne-Yahoo, izinjini zokusesha ezinkulu kunazo zonke, zisebenzisa lezo ezibizwa ngokuthi abakhasi ukuthola amakhasi emiphumela yosesho lwe-algorithmic.
Kunamawebhusayithi avimbela abakhasi ukuba bavakashele kuwo, futhi lawo mawebhusayithi azosala ngaphandle kwenkomba. Imininingwane eqoqwa ngabakhasi isetshenziswa izinjini emva kwalokho.
Ngokombiko obukwayo ngu seotribunal.com ku-ecommerce:
Ama-39% omthamo womthamo womhlaba wonke uqhamuke ekusesheni, okuphuma kuwo okungu-35% kungokokuphilayo kanye nokuseshwa okukhokhelwe okungu-4%
Ukuseshwa okukodwa kokuthathu kwama-smartphone kwenziwe ngaphambi kokuvakasha kwesitolo kanti ama-43% wabathengi enza ucwaningo oluku-inthanethi ngenkathi esesitolo
Okuhlangenwe nakho okungu-93% koku-inthanethi kuqala ngenjini yokusesha, kuthi ama-50% wemibuzo yokusesha amagama amane noma ngaphezulu
Ama-70-80% wabasebenzisi benjini yokusesha abazinaki izikhangiso ezikhokhelwayo futhi bagxile kuphela kwimiphumela yemvelo
Enye yezinto ezinkulu kakhulu ezenziwayo kwezobuchwepheshe esikhathi sonke ukuseshwa kwezwi nakanjani. Kwesinye isikhathi okubizwa ngokuthi kunikwe amandla ngezwi, kuvumela umsebenzisi ukuthi asebenzise umyalo wezwi ukusesha i-Intanethi noma into ethile. Ngaphambi kokwethula amaqiniso athakazelisayo maqondana nokuseshwa kwezwi, ake sibheke umugqa wesikhathi omfushane ngenkulumo nobuchwepheshe nokuthi kwavela kanjani eminyakeni edlule.
Konke kwaqala ngo-1961 ngokwethulwa kwe-IBM Shoebox, okuyithuluzi lokuqala lokuqaphela inkulumo elikwaziyo ukubona amagama nezinombolo eziyi-16. Intuthuko enkulu yafika ngo-1972 ngenkathi uCarnegie Mellon eqeda uhlelo lweHarpy olwaluqonda amagama angaba yinkulungwane. Kule minyaka eyishumi efanayo, sabona iTexas Instruments ikhipha ikhompyutha yezingane i-Speak & Spell ngo-1,000.
I-Dragon Dictate ibingumkhiqizo wokuqala wokuqashelwa kwenkulumo wabathengi. Yakhishwa ngo-1990 futhi yathengiswa ngama- $ 6,000. Ngo-1994, kwaqalwa i-IBM ViaVoice, kwathi ngemuva konyaka iMicrosoft yethula amathuluzi okukhuluma kwiWindows 95 yayo. I-SRI yafaka isoftware ephendula ngezwi ngonyaka olandelayo.
Ngo-2001, iMicrosoft yethule inkulumo ye-Windows ne-Office XP isebenzisa i-Speech Application Programming Interfaces, noma i-SAPI version 5.0. Eminyakeni eyisithupha kamuva, iMicrosoft ikhipha i-Mobile Voice Search for Live Search (Bing).
Eminyakeni yamuva nje, ukusesha ngezwi kuthole indawo emaphakathi ezinjini zokusesha futhi kusetshenziswa abantu abaningi njalo. Kulindeleke ukuthi ngo-2020, u-50% wakho konke ukusesha oku-inthanethi kuzoba ukuseshwa kwezwi Uhlu olulandelayo luqukethe izinhlelo zokucinga ngezwi kanye nama-softwares enziwe eminyakeni eyishumi edlule.
2011 - I-Apple yethula iSiri ye-iOS.
2012 - Kwethulwe iGoogle Now.
2013 - IMicrosoft yethula umsizi weCortana.
2014 - I-Amazon yethule i-Alexa ne-Echo kumalungu aphambili kuphela.
2016 - Umsizi weGoogle wethulwe njengengxenye ye-Allo.
2016 - Ikhaya leGoogle laqaliswa.
2016 - Umkhiqizi waseChina wethule umncintiswano we-Echo uDing Dong.
2017 - AbakwaSamsung bethule iBixby.
2017 - I-Apple yethule i-HomePod.
I-2017 - i-Alibaba yethule isipikha esihlakaniphile se-Genie X1.
Ukwethulwa kwesoftware eyinkimbinkimbi kakhulu yokusesha ngezwi kuze kube manje kwakungoMeyi walo nyaka lapho iGoogle iveze iDuplex. Isandiso soMsizi weGoogle esivumela ukuthi senze izingxoxo zemvelo ngokulingisa iphimbo lomuntu.
Olunye ushintsho olubalulekile ukusetshenziswa kwezingosi ezingomahambanendlwana. Usesho oluningi manje lwenziwa kumadivayisi eselula futhi iGoogle ilithathela phezulu leli qiniso. Ifuna ukuthi wonke amawebhusayithi abe nobungane beselula noma kungenjalo aphume ekusesheni.
Ukuze uthole okuningi nge-SEO, skrolela phansi bese uhlola i-infographic elandelayo.
Tags: Alibabaukuvumelai-altavistaifomu lombuzo wokugcina umlandocelabuza amajeeBaidui-bingbixbyUCarnegie Mellonumsizi we-cortanaUkubizelwa kweSilozitholiweuhlobo x1google umsizigoogle ekhayagoogle manjeGoogle +ikhaya lekhayaibm shoeboxI-IBM ViaVoicei-microsoft bingusesho lweselulaUkusesha Ngezwi Kwamaselulamsnukusesha kwemveloukusesha okuphilayoSamsunginkomoizibalo ze-seoizibalo ze-seoseoSyriaIzindlela Zokusebenza Zokuhlela Izinkulumoizibaloizitayelaukusesha ngezwiyahooYandex
UHarsha Kiran ungumsunguli futhi uyinhloko yokusesha eSeutribunal, umhlahlandlela oqhutshwa yidatha wokuqasha ama-ejensi e-SEO.
I-Bannerflow: Imikhankaso Yokudizayina, Yesikali, Nokushicilela